Itoobiya Oo Shaacisay Dhaqaalaha Soo Galay Sannadkan Iyo Lacagta Deynta Ah Ee Ay Iska Bixisay - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaItoobiya Oo Shaacisay Dhaqaalaha Soo Galay Sannadkan Iyo Lacagta Deynta Ah Ee Ay Iska Bixisay
Addis Ababa ( jigjigaonline) – Wasiirka Maaliyada Dawlada Itoobiya Oo sheegay in 10 kii bilood ee ugu danbeeyay soo xarooday dakhli gaadhaya 2.1 Bilyan oo doolar.bixiyeena 9 Milyan oo bira oo dayna.
Wasiirka wisaarada Maaliyada iyo iskaashiga dhaqaalaha JDFI mudane ahmed shide oo Golaha baarlamaanka dalka kasoo horjeediyey warbixinta 10kii bilood ee lasoo dhaafay ayaa sheegay in kastoo ay itoobiya 10kii bilood ee lasoo dhaafay ay bixisay inkabadan 9 bilyan oo birr oo dayn ah haddana marka loo eego Qorshaha Wasaarada ay hoosayso.
Sidookale, Wasiirka ayaa tilmaamay in itoobiya oo lagu leeyahay 27 bilyan oo doolar ay Wasaaradu horaantii Sanad Miisaaniyadyeedka Wasaaradu Qorshaysay in Tobankan bilood lee 2011T.I ay dawladu bixiso 14.2 Bilyan oo birr, Hase yeeshee lagu guulaystay in labixiyo 9.4 bilyan oo birr.
Wasiirka Maaliyada itoobiya Mudane Axmed Shide Maxamed ayaa Warbixinta kucadeeyey in Marka lacagta labixiyey loo eego Qorshihii yaalay ay Noqonayso 66%. Wuxuuna sheegay Wasiirku in dib dhacaasi ay keentay Fulinta Mashaariicda oo liidata,Sarifka lacagaha Qalaad oo kor ukacay iyo Sababo kale oo Lamid ah.
Dhanka kale, Wasiirka Maaliyada ayaa sheegay in 27ka bilyan ee Amaahda dibada ee dalka lagu leeyahay, 15.8 Bilyan lagu leeyahay dawlada federaalka Halka 11. 2da bilyan ee soo hadhayna lagu leeyahay shirkadaha horumarinta dalka
Wasiirka ayaa warbixinta uu Golaha Wakiilada shacabka kasoo horjeediyey kusheegay in Amaahda gudaha ee dawladu lagu leeyahay ay tahay 731 bilyan oo birr, iyadoo dayntan 344bilyan dawlada dhexe lagu leeyahay, shirkadaha horumarintana lagu leeyahay 387 bilyan oo birr.
Wasiirka ayaa sidookale Tilmaamay in Nidaamka shirkadaha dawlada loogu badalayo shirkado Ganacsi uu dhalaaha wadanka waxwayn kusoo kordhiyey, isagoo wasiirku sheegay in shirkadaha dhaqaalaha soo xareeyey ay kamid yihiin shirkada isgaarsiinta teleefoonada ee Ethiotelecom, shirkada Maamulka Tareenada, shirkada waxsoosaarka sonkarta, shirkada adeega gaadiidka badda iyo adeega guud..iwm.
Mudane Axmed shide aya sheegay Wasaarada Maaliyada dalku bilihii la soo dhaafay Qabatay hawlo waawayn oo amaahda dalka lagu leeyahay lagu dhimayo, isla markaana lagu kobcinayo waxsoosaarka gudaha.
Wasiirka ayaa sheegay in Amaahda uu wadanka shiinuhu itoobiya ka cafiyey, dib u habaynta nidaamka dhaqaalaha, xiliga daynta ee uu shiinuhu inoo dheereeyeen iyo hawlaha ay itoobiya ka qabatay soo ururinta dakhliga, dadajinta fulinta Mashaariicda, soo jiidashada maalgashadayaasha hoos u dhintay Dhimista amaahda dibada iyo gudaha wadanka.
Wasiirka Mudane Axmed Shide ayaa Tilmaamay in bahwadaagta horumarintu ay Taageeero tiro iyo tayaba leh ka gaysteen dhinaca kobaca dhaqaalaha.
Wasiirka ayaa sheegay in aduun lacageed oo ka badan 2 bilyan oo taageero ah ay dawladu ka keentay baanka aduunka, midoowga yurub, dawlaha faransiiska iyo Germanka isla markaana ay khasnada dawlada ilaa hadda ku soo dhacday laba bilyan oo bir.
inta hardhtayna la wado sidii sannadka dambe loo soo xarayn lahaa.
Axmed shide ayaa sidoo kale sheegay in ay Sanadka 2011 ay Qorshaysnayd in bah wadaagta Maaliyada ee Hay’adaha dibada laga soo xareeyo 4.5 bilyan, islamarkaana 10kii bilood ee lasoo dhaafay lagu guulaystay in la soo xareeyo 3. 5 bilyan oo doolarka.
Wasiirka wasaarada maaliyada iyo iskaashiga dhaqaalaha itoobiya Mudane Axmed shide maxamed ayaa warbixinta ku cadeeyey in iyadoo ay Qorshaysnayd shirkadaha horumarinta laga soo xareeyob 243 milyan oo bir lakiin Qorshihii kor loo dhaafiyey Qorshihii oo hay’adaha hormarinta 432 milyan oo birr.
Ugu dambayntiina, Gudoomiyaha gudiga joogtada ah ee dakhliga,miisaniyada iyo arimaha dhaqaalaha Golaha baarlamaanka marwo lemlem hadhigu ayaa Saktarka dhaqaalaha ugu baaqday inay hawlaha bixinta Amaahda iyo koca dhaqaalaha si kago’naanshe leh looga shaqeeyo.
Maraykanka Oo Ku Hanjabay In Tallaabo Milateri Ay Ka Qaadi Doonaan Iran